Kedu ka nchịkwa ala ga-adị n'ọdịnihu? - Ọhụụ nke Cadastre 2034 - Geofumadas
Mee, 2017 cadastre, My egeomates
Gwa ihe nchịkwa ala nwere ike ịdị ka na 2034 adịghị ka echiche dị mfe, ọ bụrụ na anyị ahụ ọtụtụ mgbanwe gbanwere na afọ 20 gara aga. Otú ọ dị, mmega ahụ bụ nnwale nke abụọ n'ihe emere 20 afọ tupu Cadastre 2014. paidtụle obere nlebara anya n'okwu ndị a nwere ike ịfu mmadụ, ụlọ ọrụ, ma ọ bụ mba niile.
Iche na na ụmụ amaala ga-akwado ma melite ya na 2034 na ntọala afọ ofufo na-ada ụda. Mana nke ahụ bụ ihe mmụgharị ihe nkiri ahụ dị ka anyị mara OpenStreet Map, nke na-ajụ ajụjụ ma ụlọ akwụkwọ ihe osise kwesịrị ịdị ma ọ bụ ọ bụrụ na anyị ejiri akụ a iji kwalite eserese eserese n'etiti ụmụ akwụkwọ na anyị na-arara onwe anyị nye naanị ụkpụrụ omume, yana Nwelite ntinye ntinye a na-apụghị izere ezere dịka usoro ihe atụ na-agbanwe agbanwe na ihe emelitere satịlaịtị.
Ọhụụ nke Cadastre n'ọdịnihu 20 afọ
Ebumnuche mgbanwe dị na Cadastre na-adịkarị mgbagwoju anya, ebe ọ bụ na ojiji ya siri ike karịa ihe osise nke akpịrịkpa ndị ọzọ. Njikọ ya na usoro iwu, gbasara ego, na akụ na ụba na-eme ka ibe ha ghara ịdabere na usoro ozi kamakwa usoro. Otú ọ dị, dị ka eserese nwere ike ịnwụ n'oge kachasị mmaDika ochichi onye kwuo uche ya ma choo maka ihe omuma nke oge, ihe di nkenke, mbinye aka nke ndi okacha-amara na usoro nke ihe omuma gha eme ka o ghara iru ihe a choro. Dịka ọmụmaatụ, ka anyị tụlee akwụkwọ encyclopedias ole na ole anyị zụtara ụmụ anyị n’oge na-adịbeghị anya ha ji arụ ọrụ ha kwa ụbọchị; olee umu akwukwo ole noro n’ulo akwukwo n’ulo akwukwo iji mechaa ihe omume ha; N'agbanyeghị ajụjụ agụmakwụkwọ ndị wikipedia nwere, iji ya arụ ọrụ, mmelite mmekorita yana ndakọrịta na injin nchọ Google, ọ na-eziga ọba akwụkwọ niile n'ụlọ ebe a na-edebe ihe mgbe ochie.
Akụkụ ọzọ ị ga-atụle n'okwu cadastre bụ eziokwu na ọnọdụ ndị metụtara ọnọdụ n'etiti mba na-ahaghị nhata nke mkpa. Maka mba Europe nke nwere 100% mkpuchi nke ihe onwunwe ha na ọkwa mba na ọrụ ndị ọrụ gọọmentị na-arụkarị, ịme ihe atụ n'akụkụ atọ na anọ dị oke mkpa. Ọnọdụ zuru oke na mba ndị mkpuchi 2D ha ezughi oke, echiche zuru oke bụ ihe mgbe ochie na karịa ebe mgbanwe ọchịchị na-eduga n'ịchụpụ otu ndị otu ndị ọkachamara nweela ahụmịhe, onye nwere ike tufuo na nka ha site na inata ozi na draịvụ ike ya yana -nke ahụ anaghị eme ka anyị na-achị ọchị- ịbanye na ọkụ nke ọfịs onyeisi obodo yana n'etiti ebumnuche ndị ọzọ na-achọ ikpochapụ omume nke nrụrụ aka.
Ọhụụ nke cadastre afọ 20 n'ọdịnihu na-emeghị ka ọ bụ nzọ dabere na cabal ma ọ bụ na-abịaru nso megide ihe dị. Kama nke ahụ, ọ bụ mmega ahụ dabere n'ezi uche nke ezi omume ejiworị eme ihe na usoro ndị ọkachamara na-achọpụta ụzọ na-enweghị ike ịgbanwe agbanwe. Mana anyi aghaghi iwepu na ihe ndi a choro nwere ike ime ka anyi doo mkpirisi; dị ka ọ dị n'ọtụtụ ọnọdụ n'Africa ebe ụmụ amaala si na amaghị ama waya ekwentị gaa na telefon nke na-esote ọgbọ. Nke ahụ bụ ihe kpatara ụdị dị ka Cadastre ezigbo-maka-nzube a na-etinye ha na okwu nke izisa ozi ọma na-akpata nsogbu n'okwu a; n'ihi ihe achọrọ ugbu a ọtụtụ nde akụrụngwa a ga-akpọ aha na nnabata nke nwa amaala n’elu ugwu nke na-ahọrọ akara aha na ‘ọzọ ma ọ bụ na-erughị ezi»Ma ebe enwere oke na ndi agbata obi ha; kama inwe ihe ọ bụla na ịtụ anya na onye ndọrọ ndọrọ ọchịchị ọzọ ga-enye ya ihe palpable ọzọ.
Nkwupụta maka afọ 20 n'aka onye nzuzu na - ahụ anya - nwere ike ime ka ị ghọta ihe a Njikwa Ngwongwo nke Mba, mepee maka nnabata ọha na eze, yana echiche nke ikike, mmachi na ibu ọrụ tupu ndị a abịa ịtụle ha dịka ọkwa; -Nke ahu nzuzu- na ikike ichikota nke usoro ochichi na ufodu nke ike nwere ike ihichapu uzo ndi ozo ma oburu na ha adighi ekwe nkwa ime ihe na oge, ugwo, traceability na uzo. Ka ọ na-erule oge ndị na-akwado usoro usoro nwere ohere ịmeghachi, ọ ga-agbanwela mgbasa ozi iwu (akwụkwọ nke ọdịnala na nnwere onwe) na akaụntụ nnweta ezigbo ụlọ dị ka nnweta nke ụlọ akụ na-enye ugbu a, ọ ga-echekwa ịpụ n'ụzọ. ndị na-emechitere ndị ahịa azụmahịa site na windo Ali-awara awara nke traceability na oge.
Ma, hey, mgbe ị na crazy amata ndị na mba gị, m laghachi ihe e kwuru na mbụ paragraf nke a edere, na okwu Cadastral 2034 bụ a n'afọ nke abụọ nke ihe Cadastral 2014, nke chọrọ na-amalite na-ekwu okwu.
Tupu Cadastre 2014
Cadastre dị ọhụrụ, ma e jiri ya tụnyere Ndenye Ngwongwo, nke dabeere na Koodu ndị a gbakọtara ruo ọtụtụ narị afọ na-adabere na ụkpụrụ ndekọ ndị na-ebuwanye ibu, nke a na-ebugharị, azụmahịa ma ọ bụ ọgụgụ isi. Ntinye nke nzube Cadastral rutere na ngwụsị site na mgbanwe nke ihe ndị na-egosi na ihe ala pụtara maka mmadụ bụ: mmeri, agha, ụtụ, mmepụta ihe, kọmputa; Ọzọkwa, ebili nke evolushọn nke ụdị akụ na ụba emewo ka usoro nchịkwa akụkọ na mmelite nke ọrụ ahụ ghọọ ihe mgbagwoju anya nke batara anyị dị ka ihe mgbagwoju anya.
Ihe omuma a na achikota ihe di iche iche nke Cadastre nwere, n'oge di iche iche:
Ụkpụrụ nke nyocha na ụtụ na ala, na-ebute ụzọ nke ala ahụ dị ka akụ na ụba e ketara n'aka ndị mmadụ. Ọ bụghị ihe mgbagwoju anya na ụzọ a adịruola ogologo oge na Latin America, na-eche na ọbụlagodi mgbe nnwere onwe nke mba ndị a si Spain, usoro akụ na ụba gara n'ihu ịbụ mmegharị nke feudalism nke bịara na ịchị ọchịchị. Na infographic nke a bụ nke mbụ nke mgbaghoju anya, gbasara ego obodo cadastre dị ka ngwa eji arụ ọrụ.
Ụdị ala ahịa, na mgbanwe nke nkasi obi dika ihe nke uwa. Nke a bịara na ngbanwe ụlọ ọrụ mmepụta ihe n’agbata 1800 na 1950. Ọtụtụ ntọala ochie nke ala gara n’ihu na-egosi na ahịa ala ahụ, yabụ iberibe ahụ enyere n’oge ahụ bụ cadastre nke iwu dị ka mgbakwunye na-arụ ọrụ gbasara ego.
Ụdị nlekọta ala, na a ọhụụ nke ala dị ka akụ. Nke a bịara na ọhụụ ọhụụ nke nwughari agha mgbe agha gasịrị, mgbe ọtụtụ ụlọ ọrụ ọha na eze nwere mmezigharị na-atọ ụtọ, gụnyere Cadastre na ndekọ. Ndị a bụ afọ dị mkpa maka ndekọ aha akwụkwọ, na-agagharị na mgbasa ozi dịka microfilming, na nke Cadastre, mmetụta nke akụ mba ụwa kwadoro mmezi nke usoro cadastral, ọkachasị maka ọdịmma nchekwa mba metụtara agha oyi. N'ihi ya, usoro akụ na ụba nke cadastre na-emezi usoro nyocha nke na-esite n'ụdị dị mfe na ọnọdụ Anglo-Saxon gaa n'ụdị mgbagwoju anya dabere na ọnụego mgbanwe na mbenata ego na ha nọgidere ruo ụbọchị ndị a n'ọtụtụ mba Latin America.
Ụdị nke mmepe mmepe, nke ala bu nk it i na-enwekar i ihe. A mụrụ nke a na mgbanwe mgbanwe ozi, na mmalite nke 80s, ebe enwere ike nke ngwaọrụ dijitalụ nwere ike dochie map na faịlụ dijitalụ, na-ewere ndụmọdụ na mmekọrịta na ndị ọzọ nwere mmasị na ozi cadastral. N'otu aka ahụ, mmasị dị na Cadastre na ndekọ karịa mmakọ na mgbanwe data, ịdị mfe maka nwa amaala site na ijikọta usoro. Ikpeazu a mere sitere na nsogbu dị ichiiche banyere iwere ihe niile dị na mpempe akwụkwọ.borges»Na echiche nke itinye eriri n'etiti Cadastre na ndekọ ka ha wee jikọọ. Ghọta na multipurpose bụ na njikọ nke ala nchịkwa uru yinye na ọ bụghị na njide na-adọ anọwo na-egbu mgbu ruo taa; iji mebie nwa amaala nke na-atụ anya ka ọrụ ka mma.
Ndenye ala 2014
N'okwu a ikpeazụ, a mụrụ Cadastre 2014. N'etiti afọ nke iri na itoolu, International Federation of Geometrists (FIG) mere otu n'ime ụzọ kachasị mma iji weghachite ọrụ ya, na-akwado atụmatụ ahụ tụlere etu Cadastre kwesịrị ịdị n'ime afọ 20 sochirinụ. Nke a na - eduga anyị ịtụle omume na usoro kachasị mma nke a na - etinye n'ọrụ n'ụwa niile, maka nchịkwa ala; na ntule nke otu Cadastre nwere ike isi bụrụ na 2014.
Site na nke a pụtara otu akwụkwọ nwere ntọala ọgụgụ isi nke ọtụtụ ndị taa nwere ike iyi ihe doro anya, agbanyeghị na anyị na-ekwu maka 1994, oge mgbe ebidoro ụzọ na nke ebipụtara na 1998. Maka 1994 Windows 95 adịtụghị nkwa, anyị jiri Windows 3.11 maka otu dị iche iche, AutoCAD R13 nke windo ahụ nke windo na-enweghị mmasị na ya tupu omume nke ihuenyo gbara ọchịchịrị nke R12, Microstation SE na kpochapụwo Clipper Ustation na-arụ ọrụ na-atọ ụtọ ma dị oke ọnụ ngwa ngwa Intergraph; Free software bụ a nerd fallacy na Internet na-arụ ọrụ site na-akpọ portals dị ka Yahoo, Lycos, Excite na Altavista na a ga-enweta site na Internet Cafe ma ọ bụ na screeching nke a modem jikọọ na Landline ekwentị.
Iji zere ihe ize ndụ nke sounding na-eru nso abụrụ si a crystal bọl, mmega ga-dabere na kacha mma ẹdude omume na ọhụụ na-eru nso nke ebe webata ihe cadastral isiokwu na okwu nke usoro, ngwaọrụ, akporo na-ejikọ-eme ihe nkiri jikọrọ n'ókèala
Ihe ngosi 6 2014 Cadastre.
1. Ọnọdụ zuru oke nke ókèala gụnyere iwu ọha na eze na mgbochi
Approachzọ a mere ka Cadastre dị ka ọ kwụsị ịhụ naanị otu akụkụ nke eziokwu, n'okpuru echiche na-enweghị isi dịka naanị ịdebanye aha iwu ma ọ bụ ibute ụzọ karịa gbasara ego. Nke a na-egosi na cadastre hiwere ọrụ ya na "eziokwu", yana foto nke otu ihe si dị n'ókèala ahụ, na-achọ idobe ozi emelitere na usoro na ihe ọmụma. Na mgbakwunye, echiche nke izu ezu, nke mere na ihe gbasara mbara igwe dị n'etiti ókè nke njirimara, dịka n'okporo ámá, akwa osimiri, ụsọ osimiri, wdg. enwere ike ịme ha otu mgbagha dị ka ihe onwunwe na eziokwu na-aga n'ihu, na-ezere na n'ọdịnihu, ihe ndị ahụ na-aga n'ihu ịrịọ ọgwụgwọ na-abanye ebe ndị ọha na eze na-eme ihe.
Akụkụ ọzọ nke nkwupụta a bụ njikọ nke data na-abụghị nke akụ, nke na-emetụta ngalaba, ojiji, ọrụ ma ọ bụ ọnọdụ nke njirimara. Ọ na-egosi na akụrụngwa data gbasara ohere nke na-enye ọrụ data dịka mpaghara echedoro, mpaghara ihe egwu, atụmatụ atụmatụ iji ala, wdg, gụnyere iwu ka mmekọrịta mmekọrịta gbasara ohere na njirimara gosipụtara dị ka mmetụta a na-ahụ na mgbasa ozi. ma ọ bụ ihe ọ bụla n'oge onye ọrụ gọọmentị ga-emerịrị ma ọ bụ nye ikike. Na ọkọlọtọ ISO-19152, nkwupụta a na-eme ka mmekọrịta nke ndị nwere mmetọ dị mfe na eziokwu nke ókèala na mmekọrịta nke abụọ nke acronym RRR (Ikike, Mmachibido, Ibu Ọrụ) na data ndị a "na-abụghị ihe onwunwe" ka a na-akpọ ihe mpaghara mpaghara.
Naanị otu ahịrị ahụ, e welitere okwu 5 ndị ​​ọzọ na akwụkwọ 2014 Cadastre nke FIG kwalitere site na FIG na 1998. Ihe atụ ndebiri egosipụtara n'aka nri nwere mgbagha nke ụdị folio ụdị nhazi nke Cadastre, yana njikwa data njikwa. na ihe ndị nwere ike ịdị iche n'etiti ụlọ ọrụ ndị were akụkọ ihe mere eme weghaara data ahụ site n'echiche dị iche iche, na-ekwenye na mmekọrịta na nnwere onwe iwu na usoro nke njikwa data iji wulie ụkpụrụ nke izi ezi:
Otu nọmba mba pụrụ iche e mere na 36 isi nomenclature,
Omuma ha nke sitere na Cadastre, ihe ha ji mara iwu sitere n'omume na ihe omuma na ihe omuma nke mmegwoju anya, ihe ndi ha na ha na ndi nwere obi.
Ntughari nke usoro enyere (tinyekwara) na nzi ozi di iche iche ma nke ahu anataghi mkpebi ma obu nhapu.
Alerts kwesịrị ekwesị, maka ọdịiche dị n'etiti ọdịdị anụ ahụ na nke iwu.
N'okpuru ebe a bụ nsonaazụ LADM, dika:
Nke a na-esi na usoro ndị na-adabere na ndị na-eme ihe nkiri n'ime usoro azụmahịa na nke nwere mmasị maka ihe kacha mkpa nke usoro ndị metụtara ya ma ọ bụ maka nghọta doro anya tupu nwa amaala nwere mmasị inweta ezi ihe.
Ihe si na mmekorita nke iwu (nke anakwere na akwukwo edeputara na nke ndi na-emeghi nke oma), na enwere ike ihu traktị nke omenala ndi ozo, nke choro dika ndi na-adighi ike ma acho anya.
Ihe nchoputa nke ihe omuma nke ihe ngbochi / ibu.
Ọ bụrụ na data ahụ sitere na sistemụ ndị ozi ala ọzọ nke Cadastre, Registry, Regularization ma ọ bụ Registry Regime pụrụ iche, onye ọ bụla nwere ike ịrara onwe ya nye iji bulie ihe kpatara ozi ala ọzọ ha ma nwa amaala ma ọ bụ onye ọrụ usoro nwere ike ịtụkwasị obi na data a bụ eziokwu ikpeazụ. Site na taabụ nke eziokwu, enwere ike igosi ụdị ihe mgbagha dị na folks dị iche iche dịka akwụkwọ ikike, ego mgbazinye ego ma ọ bụ njikọ na registri ndị ọzọ dịka azụmahịa, ọgụgụ isi, nchekwa na n'otu ụzọ ahụ, ọ bụrụ na a jụọ eziokwu ahụ, a ga-ahụ ihe ndị ahụ ụlọ ọrụ iwu na mpaghara nwere ndị nwere mmasị na mmetụ / mmachi na-akpata ihe onwunwe nke mmasị. Na ọkwa nke ụlọ ọrụ gọọmentị, data a zuru oke kwesịrị ịpụta na enweghị mmachi, ma ọ bụrụ na atumatu lekwasịrị anya na arụmọrụ azụmahịa na mmebi nke ndị isi n'etiti ụlọ ọrụ ọha na eze na ndị na-eme ihe nkiri ozugbo nye nwa amaala dị ka notari, obodo, onye na-elekọta obodo ma ọ bụ onye nyocha. Kọwa ihe nke a nwere ike ịbụ na nnweta nnweta nye nwa amaala bụ naanị okwu nghọta na atumatu uru, ebe ọ bụ na ihe dị n'elu (Master data) nwere ike ịbụ n'efu, ebe ndị ọzọ nọ n'ụdị adịghị mma na ụgbọ ibu azụmahịa na mmemmem na-amụba ihe ozugbo akwụkwọ zuru ezu data.
2. Enweghị nkewa n'etiti map na ihe ndekọ
Nkwupụta a bụ ihe doro anya karịa, ọ bụ ezie na maka 1994 ọ bụ nrọ, na-atụle na mbọ ndị a kacha mara amara hụrụ CAD ka ejiri hyperlink jikọtara ya na ndekọ nke oghere mbara ala, na n'etiti ihe kachasị njọ na profaịlụ ebe enweghị ike ịmepụta ubi. ndị nkuzi maka ọtụtụ mmekọrịta ha, dị ka nza nwere ọtụtụ ndị nwere ya ma ọ bụ ndị nwere ọtụtụ nza; ya mere ekwesiri imeghari aha onye nwe ya dika otutu ihe o siri gosi n’ókèala ya ... n’ebighi n’ime uzo ihe omuma putara ya na ihe ndi 16 pere mpe.
Obi abụọ adịghị ya, nkwupụta a setịpụrụ ụkpụrụ nduzi na-adọrọ mmasị banyere isiokwu ụwa nke metụtara njikwa ala. Ọ bụ ezie na ọ bara uru icheta na echiche mbụ bụ iji zoo aka na "null nkewa n'etiti data Cadastre na ihe ndekọ aha Njirimara" na ọ bụghị naanị "map - faịlụ cadastral".
Nke a na-enyekwa nnabata na nhazi data data sitere na iwu ndị ọzọ dị ka "ihe iwu mpaghara" metụtara ojiji, ngalaba ma ọ bụ ọrụ nke njirimara ahụ. iru ebumnuche nke ọdụ data nke na-ekpughe ọrụ nye ihe ntinye data gbasara data yana atumatu na iwu nke mmekọrịta n'etiti ụdị. Ikekwe okwu mmeri na nke a bụ ntozu oke nke ụkpụrụ OGC nke sọftụwia na-akwụghị ụgwọ wee jiri sọftụwia nabatara ya.
3. Nlereanya ahụ ga-eji dochie esemokwu nke cadastral
The mma arụmọrụ nke a nwoghara na ISO-19152 ọkọlọtọ, na-achọ n'ịtụle mfe nke mmekọahụ (RRR) n'etiti ọmụmụ na mejupụtara ahụ eziokwu (ndị mmadụ, ọdịdị ala), na o yie eziokwu (ndutịm unit gbasara ohere unit) na isi mmalite nke ndekọ ndekọ (Isi).
Ọ dị mfe ịsị, na eserese n'aka nri yiri ka ọ dị mfe. Ọ bụ ezie na iweta nke ahụ na ISO maka mmejuputa mere ka ọ dị mgbagwoju anya karịa ka a tụrụ anya na mkpa mbụ. Mgbalị mbụ a kpọrọ Usoro Akara Cadastre Akara (CCDM), nke a na-akpọ LADM, mechara ghọọ ISO na 2012.
Ma ọ bụrụ na ụfọdụ echee na ISO nwere ike ịbụ ihe na-enweghị isi, ndị anyị bụ ndị gụrụ Cadastre 2014 na afọ ndị mbụ ahụ maara na usoro ntụgharị asụsụ dị mkpa-ma ka na-abụ ihe ịma aka-. Ihe mbu edeputara aghara site na isi okwu na okwu, karisia nye ndi bu ndi dibia akwukwo banyere asusu na ndi choro iju ajuju karia ime ka ha ju anya site n’ide ederede. Dị ka ihe atụ, atụghị ka okwu ahụ bụ "cadastre - cadastre" ịsụgharị n'ihi na maka ọnọdụ dị ka Holland, Cadastre bụ Registry; mgbe ha wetara ya na ọkọlọtọ ha na-akpọ ya "nchịkwa ala" nke na-ada ụda na-adọrọ adọrọ na Spanish ka "nchịkwa ala"; Tupu o yie ka ọ bụ naanị elu na ọ bụghị mmekọrịta ya niile, Aenor na-asụgharị ya dị ka "Nchịkwa Territory", nke n'ọtụtụ mba bụ okwu dị mkpirikpi na nke enweghị ntụpọ metụtara njikwa ụlọ ọrụ. Ihe omuma atu ndi ozo bu okwu "ngwugwu" nke nke Anglo-Saxons bu ezigbo ala ma obu na onodu asusu Spanish na acho ikpa oke na ime obodo ma tinyeghi oganihu dika usoro ndi obodo gosiputara.
Nke a bụ kpọmkwem ihe ISO-19152 na-achọ, iji hazie usoro mmụta asụsụ nke "ngalaba". Ọ bụ ezie na ọ nweghị akwụkwọ bara uru nke na-egosipụta nkà ihe ọmụma ya ma na-eduzi mmejuputa ya; Nyere na ụdị UML adịghị mfe ịre ndị na-eme mkpebi na-atụ anya nsonaazụ ikpeazụ maka nwa amaala.
N'ebe a, ọ dị mfe ịkọwa na mmekọrịta na ọdịiche dị n'etiti LADM na ISO-19152.
A mụrụ LADM site n'ọhụụ zuru ụwa ọnụ, banyere omume na ọnọdụ 20 afọ n'ọdịnihu na nchịkwa ala. LADM bu ihe omuma.
Ụkpụrụ 19152 ISO ahụ na-arụpụta site na mmekọrịta mmadụ na ụwa, iji dokwuo sistemụ nke Ala Nchịkwa. The ISO bụ ọkọlọtọ iji tinye ihe ọmụma LADM.
N'okwu a nke nkuchi enwere mkpa ide, karia itinye uche na ụdị UML na ịnakwere ngwa anya teknụzụ maka isiokwu na ngosipụta na ihe omume; Ọ ga-abụ ihe na-atọ ụtọ itinyekwu mgbalị na nsonaazụ nnabata na ọkwa usoro, ịhazi usoro nke ahụmịhe na omume ọma nke na-akwado ire ere na ọkwa ndị na-eme mkpebi. Maka nke a, enwere ihe atụ dịka Honduras, nke nakweere ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nkà ihe ọmụma LADM niile na SURE-SINAP sistemụ ya, na-etinyeghị ya na iwu ọha, site n'eziokwu dị mfe nke dabere na CCDM ebe 2005 kwere ka ọ ịga n'ihu na-atọ ụtọ n'agbanyeghị enweghị nkwenye nke mba a nweela na afọ 15 gara aga; ma ọ bụ okwu ndị dị ka Nicaragua na n'egosighi mmejuputa iwu nke isi, ihe SIICAR niile na-egosipụta nnabata nke ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọkwa 2 kwekọrọ na ọkọlọtọ.
4. Usoro nhazi nke cadastre ga-abụ ihe n'oge gara aga
Dika ihe nlere anya nke ihe nlere a na icheghari nke uzo di iche iche, uzo di iche iche bilitere na ihe ndi ozo dika cadastral nomenclature. N'oge ochie, igodo nke cadastral bụ usoro nke ruru ọnụọgụ 30, ebe agwakọtara njirimara na njirimara nchịkwa; Ọ bụ ezie na ọ bụ ịhụnanya maka ndị ọrụ n'ime ụlọ ọrụ ahụ, maka onye ọrụ njedebe ha siri ike ma ghara ịba uru ọ bụrụ na ọtụtụ ọnụọgụ ndị ahụ enweghị efu. Dị ka ihe atụ, nomenclatures ndị a gụnyere ma ihe onwunwe bụ nke ime obodo; ma ọ bụrụ na nke a mere na-atụle obodo mepere emepe ya njirimara ihe gbanwere n'ihi na ọtụtụ ndị mejupụtara abụghị otu. Otutu nke echiche a sitere na nhazi nke usoro ihe eji eme ihe, dika anyi na-echeta na na mbu ihe mepere emepe na ime obodo mejuputara nha nke map ndi ozo, nke bu maka ebe ndi mmadu choro ihe 1: 1,000 ma maka ime obodo 1: 5,000 ma ọ bụ 1: 10,000.
Iche echiche na usoro dijitalụ na-eduga n'ịhapụ atụmatụ ndị a, na-eche echiche banyere ihe na-agbakwunye uru maka nwa amaala chọrọ nọmba dị mfe na ịme ngosipụta ebe ihe onwunwe ga-aga n'ihu na-ejigide njirimara ya n'agbanyeghị agbanye obodo na-agbanwe agbanwe n'ihi mgbanwe nke ókèala obodo, n'agbanyeghị gbanwee ọnọdụ ya na-ezighi ezi, n'agbanyeghị na ọ gbanwere ụdị obodo ya na ime obodo. Ọ bụghị na mpaghara ndị a adịkwaghị mkpa, mana ọ bụrụ na ha nọ na tebụl njirimara, enwere ike gbanwee ha n'oge ọ bụla na-enweghị ihe gbanwere njirimara ya; Ọ gwụla ma, mgbanwe ahụ na-egosi mgbanwe nke jiometrị ya.
Na nke a, ụzọ njirimara dị mma karị na-ebilite, dị ka ndị eji sistemụ dị ka akwụkwọ ikike ngafe, usoro, efere ụgbọ ala (inye ihe atụ). Nọmba ọnụọgụ 30 ga-abụ ihe ịhụnanya; anyị nwere ike ịnwe ụcha ụgbọ ala, ọnụ ọgụgụ ọnụ ụzọ ya, ọnụ ọgụgụ wiil, akara na ikekwe ọnụọgụgụ nke oge onye nwe ya nwere mmekọahụ na oche azụ; ma efere ahụ dị obere ma ọnụọgụ ole na ole nọ na ya; onye uwe ojii okporo ụzọ nwere ihe ncheta dị njọ ma na-arụsi ọrụ ike icheta nọmba ahụ ngwa ngwa ọ bụrụgodị na ụgbọ ala ahụ na-agba ọsọ; na mgbe ahụ na ọ ga-abụ immutable na oge dị ka ogologo dị ka ọ bụ otu ụgbọala. Site n'ebe ahụ ụzọ bilitere nke nwere ike ịgbanwe nọmba dabere na ọnụọgụ ọnụọgụ 10 (isi 10) na koodu nke ngwakọta nke nọmba iri ahụ na mkpụrụedemede 26 nke mkpụrụ okwu (isi 36);
Ọmụmaatụ nke ntọala 10 rue ntọala 36 ntụgharị bụ: 0311000226 ga-apụta 555TB6. Ọ pụtara na ọ bụrụ naanị mkpụrụ ọnụọgụ isii ọ nwere ike ịkwado ihe ruru ijeri iri pụrụ iche, na-echekwa otu nha (ọnụọgụ isii). Dị ka akpaaka ga-ekwe omume ime mgbanwe a na mmekọrita megide nọmba ndị gara aga; maka nwa amaala, koodu ahụ bụ eriri dị mkpirikpi, n'ime ya na njirimara koodu nwere ike masked ma ọ bụ naanị nọmba na-esote na ọkwa mba. Iji nwalee otu esi arụ ọrụ, m na-atụ aro google njikọ.
5. Mmekọ ọrụ n'etiti ụlọ ọrụ nzuzo na ụlọ ọrụ ọha na eze
Omume a enweela mmetụta dị ukwuu na ụdị mmekọrịta mmekọrịta ọha na eze, na-achọ ịfefe na ngalaba ndị ọzọ akụkụ ndị na-abụghị azụmaahịa na-adigide maka ụlọ ọrụ ọha na eze. N'afọ ndị ọzọ, Cadastre mere nyocha zuru ezu n'ọhịa, ya na brigades nke ndị mmadụ were n'ọrụ site na ụlọ ọrụ ahụ; taa ọ dị mfe ịpụta ọrụ ahụ. N'otu aka ahụ, nchịkọta data na mmịpụta nke data sitere na ndekọ anụ ahụ, na-enye ndị ọrụ nkeonwe ohere ịrụ ọrụ ndị ahụ "na-adịru nwa oge" ma ọ bụ opekata mpe ma ọ bụrụ na emebiri ha nke ọma, ha na-eme otu ugboro, na-ezere itinye ego na akụrụngwa na-abaghị uru na ihu igwe.
Agbanyeghị, ọ bụ ihe ịma aka nke enwere ọtụtụ ihe ịhazi n'usoro nke nwayọ nwayọ na ihe egwu dị. Nyefe ọfịs n'ihu ụlọ akụ yiri ka ọ dị mfe na ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ iwu, mana inyefe nnata nke ozi chọrọ ụdị nkwa ndị ọzọ, ọ bụghị naanị na nchekwa kamakwa na ọrụ iwu na nke nchịkwa.
6. A ga-enwe ike ịchọta ego ahụ na Cadastre
Isiokwu ahụ enyeghị ihe ọzọ, anyị nwere olileanya imetụ ya aka na mbipụta n'ọdịnihu. Mana nke bụ isi ụkpụrụ a dabere n'eziokwu bụ na ijide ozi, mbugharị site na anụ ahụ gaa na dijitalụ ma ọ bụ iwu nke nnukwu usoro a na-eme otu ugboro. Ọ na-eme nke ọma. Ọrụ mmelite na-esote na ntopute ya ekwesịghị ịchọ mgbazinye ego sitere na ụlọ ọrụ mba dị iche iche, mana ọ ga-abụrịrị na mpempe akwụkwọ nke itinyeghachi ego nke ihe ndị sitere na ihe ọhụrụ na ngwaahịa na ọrụ ọhụrụ.
Nkọwa Nchịkọta 2034 Land Regula
Maka 2014 a na-enyocha ihe njem ahụ, ọganihu na nchọpụta ọhụrụ iji tụlee ihe ga-abịa n'ime afọ 20 sochirinụ.
Na nyochaa a, anyị na-atụle ihe omimi ndị metụtalarị mgbanwe akụkọ ahụ na cadastre, dịka ebe nchekwa data na ihe owuwu dị iche iche, njedebe nke ọha mmadụ; N'otu aka ahụ, ọhụụ nke mere ka ndị Cadastre dị ka ala nchịkwa, ochichi nke ókèala ahụ na ihe a ga-atụ anya na ọdịnihu ga-adị mfe.
N'ihi ya, okwu isii na ajụjụ 6 bilitere. Dị ka Cadastre 6, ọ bụ nkọwa dabere na gburugburu nke ihe na-eme. Countriesfọdụ mba ndị meriri oghere elementrị ga - anabata ụfọdụ n'ime usoro ndị a, n'ihi na nkwụsi ike na mkpa ha na - achọ ihe karịa n'ahịa ha; nke a ga-amịpụta na ndị ọzọ nwere ike ịchekwa onwe ha ụzọ mkpirisi nke ọgbakọ. Ndị ọzọ, n'ihi inwe mkpa ndị dị mkpa, ga-anọgide na-anwa imeju ụgwọ nke nkwupụta 2014 Cadastre.
1. Mmasị kachasị
Isi isiokwu ahụ dị oke nká, na Borges na-anakọta ya site na isi iyi nke sitere na 1658:
Na Alaeze Ukwu ahụ, Art nke Cartography nwetara ụdị zuru okè na map nke otu Province nwere obodo zuru ezu, na map nke Alaeze Ukwu, a dum Province. Ka oge na-aga, ndị Unconscionable Maps enweghị afọ ojuju, ndị Cartographers kọleji zụlitere Map nke Alaeze Ukwu, nke bụ nke Alaeze Ukwu ahụ ma kwekọọ na ya.
Naa Ara na Study of Cartography, na-esonụ ọgbọ ghọtara na a dilated Map bụ na-abaghị uru na-enweghị enweghị nsọpụrụ nye ya Inclement Sun na winters. N'ọzara ndị dị n'Ebe Ọdịda Anyanwụ, e bibie Map Ruins, anụ ọhịa na anụ ọhịa ndị bi na ya; n'ime mba ahụ, e nweghị akwụkwọ ọzọ nke ndị nkuzi nke mba.
Ọ bụ nchegbu mgbe niile, karịsịa na ọnọdụ ebe echefuru ya na inwe ókèala niile nwere njirimara ziri ezi na-achịkwa dị mkpa karịa ịnwe naanị otu mpempe akwụkwọ nwere oke nkenke. Site na ohere nke teknụzụ dị ugbu a, nkwupụta a na-ekwu na isiokwu a ga-adọrọ mmasị n'ozuzu na afọ 20 sochirinụ; karịsịa ebe mkpuchi nke ókèala agafeworị ma naanị mmasị bụ iji melite nkenke ya.
2. Ntughari ihe maka ikike, okechi na ibu ọrụ
Nke a bụ mgbanwe nke ihe eburula ụzọ mee na Cadastre 2014, nwere ụdị dị iche iche na kama ịbụ naanị mmekọrịta mmekọrịta n'etiti mpaghara mpaghara nke iwu na njirimara, ha nwere ike ịbụ ihe nwere ụdị agbatị ha. Ọmụmaatụ tupu oge eruo bụ ndekọ aha pụrụ iche nke mba ụfọdụ nwere; M na-ekwusi ike, karịa ịbụ mmekọrịta dị n'agbata ọkwa, ọ na-eduga na ntinye nke usoro ndebanye aha na ihe ndị a na-eme ka akụkọ ihe mere eme ha, iwu ziri ezi, ekpere nke ndị nwere mmasị na ọnọdụ n'oge eji na ọkwa.
Ya mere, na ikuku nke njedebe nke ọdịda nke ọdụ ụgbọ elu, emee ka ejizie ya dị ka ihe ọ bụ; ebe karịa ọha iwu, ma na ihe dị iche na overlaps na ọtụtụ ala nke onwe iwu, o nwere a akụkọ ihe mere eme nke ahụ bụ iwu na mere otu onye nwe onye bụ na alụmdi na-arụ ọrụ dị irè ụbọchị nke ya gbasara ohere jiometrị ( atọ dị iche iche) ma bụrụ nanị nke a ga-agbanwe site na azụmahịa.
3. Inwe ike ijikwa 3D
Nke a karịrị ihe doro anya. Ruo ugbu a, akụkụ atọ ahụ anọchitela anya, ọkachasị mkpụrụ akwụkwọ. Ọ ga-ekwe omume ịbanye n'otu ụlọ dị na mbara ala ebe ọ maara koodu koodu ya, ọkwa nke ihe owuwu ahụ, nọmba ụlọ elu ahụ, ọkwa ya na nọmba ụlọ ya.
Omume nke Digital Twins na SmartCities na-eduga n'usoro nhazi ụzọ atọ dị iche iche na arụmọrụ sọftụwia maka njikwa akụ (Indoors Cadastre). Ọfọn, karịa ihe nnọchianya ahụ, Cadastre 2034 na-ekwu na enwere ike ijikwa ha; pụtara, tinye usoro ndekọ ihe ka mmelite ha abụghị naanị imetụ ma hichapụ, mana ejikọtara ya na usoro ndụ ndụ; amuru ha, ha weghaara geometry ha, ha emee ya, ha abia n’oru ha n’aru kwa ubochi nke mmadu, ha na agbanwe mmughari, ha nwuru anwu.
Nke a ga-agụnye management ikike 3D doro nke ọhụrụ ụzọ nke ozi kpọọ, leveraging usoro ugbu a adị dị ka mgbe oji ma na atụmatụ iji nyere aka chọpụta ihe na mfe akụrụngwa na ụdị na-digital teren ụdị.
4. Mmelite oge
Ọ bụrụhaala na ndị na-eme ihe nkiri na njikwa ala jikọtara ya na onye nwe ụlọ, usoro ndị nwere ike ịdị nhata ga-abụ ihe na-adịghị mkpa. Dịka ọmụmaatụ, ụlọ akụ kwesịrị inwe ike ịbanye na mgbazinye ego na-enweghị akwụkwọ notari dị ka onye na-etiti ụlọ; N'ozuzu ya, ọ bụ onye ọrụ nke usoro ahụ nyere ikike na ọ bụ ya na onye amaala nkwekọrịta, onye na-enye ikike ikike ya na ihe onwunwe ya. Ka ọ dị ugbu a, gọọmentị oge ochie ga-enwe ike itinye onye na-edeba aha na-pịa bọtịnụ n'ime ịnabata ndebanye aha ahụ, ruo mgbe ike gwụrụ ya ịrịọ ikikere n'ihi na mkpịsị aka ya na-afụ ụfụ, ha ga-etinye ya n'okporo ámá ma nyefee ya arụmọrụ ahụ nye ụlọ ọrụ enyere ikike nọ n'ụlọ akụ. Otu mgbagha ahụ metụtara ndị ọzọ na-eme ihe nkiri ugbu a na-etinye aka na azụmahịa, dịka onye nlekọta obodo, onye nyocha, notari, obodo, wdg. Ọ bụrụhaala na ndị na-eme ihe nkiri jikọtara ọnụ, mmelite ahụ ga-adị na oge na asọmpi ga-abụ ọrụ kachasị mma.
Mgbe ahụ, ndị mmadụ ga-emelite cadastre ahụ, na ebe ha na-eme azụmahịa.
Nke a dịtụ obere, mana ọ bụrịrị okwu gbasara ụlọ akụ. Tupu mgbe ahụ, ụlọ akụ ahụ nyere kaadị (ha, dị ka kaadị tiketi njem), ọ dịkwa mkpa ịga ụlọ akụ iji wepu ego, wee jiri ego ahụ zụta, ma ọ bụrụ na anyị nwere oke, anyị nwere ike ịga tinye ya n'ụlọ akụ ma ọ bụ na mkpọ nke mmiri ara ehi n’okpuru ihe ndina. Taa, ị mepere akaụntụ ụlọ akụ, ha enye gị kaadị debit na paswọọdụ iji jikwaa na ịntanetị; Naghịzi apụ n'ụlọ akụ, kama na igwe ndọrọ ego; akaụntụ gị na-emelite na ozugbo mgbe ị na-azụ ihe ọ bụla azụmahịa, online ma ọ bụ nyefee ndị ọzọ site na mkpanaka gị mgbe ị nọ na tagzi.
Omume na-egosi ebe ahụ, na onye ọrụ ahụ abanye na akaụntụ ya nke Ndekọ Njikwa Ngwongwo Mba, wee hụ ebe ahụ ihe ndị o nwere, ọ bụrụ na ọ chọrọ ịgbazinye ego ọ nwere ike ime ya ozugbo na ụlọ akụ, ọ bụrụ na ọ chọrọ ire ya ọ nwere ike ime ya ozugbo, ma ọ bụrụ na ọ chọrọ ijikwa a ikike iwu ma ọ bụ ikike ịrụ ọrụ ... ka ọ na-eme na ụlọ akụ! "Dị ka Uber", nke a enweghị ike ịkwụsị ndị ọrụ cadastre archaic, ọbụnadị ndị otu notari. Naanị mkpa ahịa; ruo n'ókè usoro ndị ahụ ahaziri, a na-ewusi nchebe na izu ezu nke ozi ahụ; a ga - ejikọ ụdị azụmaahịa na - akpaghasị ọnụ ahịa yana azịza nke ụmụ amaala dị ka ihe kacha mkpa.
Na nke a, usoro nke ahụ nwere ike ugbu a na-arụ ọrụ iche iche converge ka ihe onwunwe ahịa (mgbazinye na ahịa) ebe B2B ka AirBnb atụmatụ na-egbu ot nlereanya na a onwe-haziri zuru ụwa ọnụ site na njedebe ọrụ; na-anwụ anwụ n'ụzọ na ezigbo ala na ụlọ gị n'ụlọnga, ọkàiwu na-eme ka nkwekọrịta, ndị appraiser na-eme ka ọmụmụ nke akụ na ụba na ikike, ụlọ ọrụ na-ana achi achi mma na n'elu ihe nile na-ala na-adọga ime ka tax.
Ọ ga - eme na usoro ndebanye aha ihe onwunwe ga - adị n'otu, na ndekọ nke "ngwongwo dị ka ere ahịa", nke a metụtara ọnọdụ ndị dị ka ngwongwo ibugharị (ụgbọ ala), ngwongwo ọgụgụ isi, ngwongwo azụmahịa (ụlọ ọrụ, mbak), n'okpuru nha anya nke " ahịa nchebe '. Maka nke a, teknụzụ dị ka BlockChain na keakamere ọgụgụ isi ga-uru nke nwere ọgụgụ isi contracts na Baịbụl nke a digital ejima ihe ahụ bụ eziokwu na ya Ẹkot cryptocurrency, ruo n'ókè nke na securitization na-ekwe nkwa na a aha ebe ọchịchị agaghịkwa ụgbọ mmiri.
Mgbe ahụ, ndekọ ndekọ cadastre ga-emelite n'oge ozugbo dịka ọ na-emeworị n'ọnọdụ ndị ọzọ nke ndụ kwa ụbọchị.
Ọ bụkwa ajụjụ banyere "nnweta nnabata nke ịdị ngwa nke Cadastral-Registral Register na-ezute nnukwu mkpa n'ụwa." Ọ bụ ya mere ajụjụ a ji dị: Ọ bụ Cadastre Conventional dị njikere iji zute ọnụ ahịa, oge na ịchọpụta mkpa nke 70% nke ndị bi na enweghi ikike ikike? Anyị anaghị ekwu maka ịme ka a mata ókèala anyị n’ime afọ iri ise, kama ọ bụ n’oge kacha elu nke afọ isii; ọ bụ ezie na maka nke a, anyị ga-agbaji paradaịs nke usoro usoro cadastral ugbu a si aga, na-elekwasị anya n'ihe na-agbakwunye uru na ndenye Ala.
Anyị na-ezo aka, ya mere, na akụkụ a metụtara nkwupụta a bụ mkpa ụwa niile ịdebanye aha ndị na-enweghị njirimara nke usoro ọrụ gọọmentị ghọtara, ihe ndị edebanyere aha na ndepụta nke ikike ndị a na-eme. ala a. Nke a, na-ekwughi na na ihe edebanyelarị n'akwụkwọ, enwere akụkọ mgbe ochie dị oke egwu. Inweta idozi nsogbu a na afọ 20 sochirinụ na-egosi ichegharị uche banyere usoro na-emebi usoro nke na-enye ohere mbelata oge, ụgwọ na itinyekwu aka nke ndị mmadụ.
5. Cadastre zuru ụwa ọnụ na mmekọrịta
Naanị nke ahụ. Nhazi ụkpụrụ ahịa, yana njirimara ihe ụwa niile. Na mkpofu nwere ike ịnwe koodu 30 nke na-agbanwe oge ọ bụla ihe onwunwe jupụtara ugwu.
6. Inwe ike ịchịkwa ala ala
Nke a na-egosi eserese nke ihe ndị a na-apụghị ịhụ anya, dị ka ebe nchekwa ọdịdị nke mmasị ya bụ mba, ebe nchekwa nke coral dị n'oké osimiri.
Ajụjụ banyere ọrụ omume nke Cadastre n'ọdịnihu
Na Cadastre 2034, nsogbu nke mmasị ụwa na-ebulitekwa, nke ọ nwere ike ịbụ na Cadastre na-etinye aka, ma ọ bụrụ na ọ dị, ọ ga-akara akara ngosi ọhụụ maka njikwa nke ozi ọmụma zuru oke na gburugburu ụwa jikọrọ ọnụ. Ajuju ndi a bu:
1. Ala na-ejide Ndi Cadastre ga-etinye aka na ndebanye aha nke ozi a?
2. Nchekwa nri Ọ ga-enwe mmasị na ijikọta na ihe nke ókèala ahụ ha na mmekọrịta ha na mmadụ na-eji, ohere na nnweta nke nri nri?
3. Mgbanwe ihu igwe Ọ ga-enwe mmasị na ndebanye aha nke ikike na nsogbu ndị na-enweghị nsogbu na mgbanwe nke ihu igwe?
4. Ìgwè mmadụ Cadastre. Kedu ihe ga - eme na enweghị ike ịme na cadastre na - emekọ ihe ọnụ?
5. Green cadastre. Iwu oke Green?
6. Global cadastre. Kedu akụrụngwa ga-adị mkpa maka Cadastre zuru ụwa ọnụ?
Fit-for-nzube cadastre dị ka Uber. Geometers ga-etinye aka, n'ihi na ọ ga-eme ma ọ bụ na-enweghị anyị.
Previous Post«Previous Camera System Turu-streetview
Next Post ArcGIS - Akwụkwọ FotoNext »